Mataano leh afar gacmood iyo labo lugood - BBC Somali
Mataano leh afar gacmood iyo labo lugood
11 Abriil 2014
Image caption Isbitaal ku yaal waddanka India
Waddanka India waxaa jira mataano isku dhegan oo dadkuna ay u haystaan awliyo, Isla markasna diiddan in la kala jaro.
Dadka India waxay ku noqotay fajiciso iyo layaab kaddib marki halkaas ay ku dhasheen labo mataano oo iskaga dhegaan qaarka hoose. Waxaayna aaminsan yihiin dadka ku nool tuulada ilmahaasi ku dhasheen inay yihiin waliyo.
Iyadoo dhakhaatiirtu sheegayan in ay surtogal tahay in qalliin lagu sameeyo oo la kala jaro ama la kala saaro mataanahaan oo iskaga dhegan miskaha, haddana iyaga ayaa diideen. Mid ka mid ah mataanahaas oo lagu magacaabo Shivram wuxuu yiri ''Ma doonayno in nala kala jaro. Waxaan doonaynaa inaan sidaan ahaano oo aan isku dheganaano weligaya, xitaa markaanu waynaano. waxaana doonayna inaan sidaas ku nolaano''.
labadan ilmood waxaay ku dhasheen tuulo yar oo u dhow magaalada la yiraahdo Raipur oo ku taal bartamaha waddanka India. Waxa ayna wadagaan labo lugood iyo afar gacmood. Markay soconayaan waxay is dhafsadaan gacmaha iyagoo labo gacmood hoos u laadlaadinaya halka labada kalena ay kor u hayaan.
dhakhaatiirta ku howlan cafimaadkooda ayaa ku tilmaamay la yaab marka laga eego awood ay u leyihiin inay ismaamulaan, sida dhar xirashada, wax dhiqista iyo waliba iney iyagu iskood isku quudin karaan. Sidoo kale dhakhaatiirtu waxay u shegeen qoyskooda inay carruurtoodu cafimaad qabaan oo aanan la kala goyn Karin.
Waxaa la aaminsan yahay labadaan mataanod inay wadagaan caloosha haddana midkasti wuxuu si gaar ah u leeyahay wadnaha, maskaxda iyo weliba sanbabada.
Waxaa tarjuntay Iimaan Maxamed oo tababar u joogta Laanta Af-Soomaaliga ee BBC London.